स्क्रब टाइफस र निपाह भाइरसबाट सर्तक रहन चिकित्सकको आग्रह - Sankalpa Khabar
स्क्रब टाइफस र निपाह भाइरसबाट सर्तक रहन चिकित्सकको आग्रह
३० भाद्र १६:२३
काठमाडौं । झन्डै पाँच वर्षअघिदेखि नेपालमा देखिन थालेको स्क्रब टाइफस रोग र निपाह भाइरसबाट सर्तक रहन सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यी दुवै कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले सामान्य लक्षण देखिने वित्तिकै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
स्क्रब टाइफस एक प्रकारको सानो किर्नाको टोकाइबाट सर्ने यस रोगको लक्षण कोरोना संक्रमणसँग मिल्दो जुल्दो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ज्वरो, शरीर दुख्ने नै यसको मुख्य लक्षण हो । ज्वरोको कारण नखुलेका र कोरोना संक्रमण नेगेटिभ देखिएका सबै व्यक्तिहरूले स्क्रब टाइफसको परीक्षण गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ ।
वर्षायाममा देखिने स्क्रब टाइफसका कारण खासगरी नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार यस वर्ष मृत्यु भएकामध्ये १६ जनामा स्क्रब टाइफस पोजेटिभ देखिएको छ । जसमध्ये पाल्पामा सबैभन्दा बढी चार जना मृत्यु भएका व्यक्तिमा स्क्रब टाइफस पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता डा. अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार चितवन र कैलालीमा मृत्यु भएकाहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ ।
नेपालमा ५० जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण, मृत्यु भएका १६ जना संक्रमित रहेको पुष्टि भएको छ ।
यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका १ सय १८ अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निपाह भाइरसको परीक्षणका लागि तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले चमेराबाट सर्ने यस रोग प्राणघातक रोग मानिसबाट मानिसमा पनि सर्ने जोखिम रहेकाले सबै सचेत हुनेपर्ने बताए । शरीरको तरल पदार्थबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले सर्तकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
रगतबाट परीक्षण गरिने यस भाइरस परीक्षण गर्ने किट सबै तिर नभएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । भारतसँग सीमा जोडिएका कारण र संक्रमण फैलाउने चमेरा नेपालमा पनि पाइने भएकाले थप सचेत हुन पनि उनले आग्रह गर्नुभयो ।
पशुपंक्षीको सम्पर्ककमा धेरै रहने व्यक्तिहरू यसको जोखिमबाट जोगिन बढी सचेत हुनुपर्नेमा डा. पौडेलले जोड दिए । चराले टोकेका वा घाउ लागेका फलफूलहरू नखान र मासुजन्य पदार्थहरू राम्रोसँग पकाएर मात्र खान उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।